यस्ता संकेत देखिए हुन्छ धन लाभ, तपाईले पनि पाउनुभयो की ? - Kohalpur Trends
काठमाडौँ । हिन्दू धर्म शास्त्र र विशेष गरि वास्तु शास्त्रमा शुभ र अशुभ कुराहरुको संकेतबारे व्याख्या गरिएको पाउन सकिन्छ।जीवनमा घट्न विभिन्न घटनाक्रमहरुबाट विभिन्न संकेतबाट शुभ हँदैछ कि अशुभ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। यस्ता संकेतले भविष्यमा हुने घटनाले तपाइँलाई राम्रो गर्छन् कि नराम्रो भन्ने थाहा दिन्छन्। धन प्राप्तिका लागि कस्ता संकेत शुभ ?
१) यदि तपाइँको दायाँ हातको हत्केला चिलायो भने बुझ्नुस् तपाइँलाई धन हात पर्दैछ । बैंक जाने समयमा बाटोमा गाइ देख्नु भो भने तपाइँको काम पुरा हुन्छ ।
४) सपनामा हरियो घास, पात देखिएमा ।
५) यदि सपनामा मोती, मुङ्गा, हार जस्ता गहना देख्नु भो भने घरमा लक्ष्मीको बास हुन्छ ।
९) कतै जाँदा लोखर्केले बाटो काट्यो भने पैसा हात पर्न सक्छ ।
१०) सपनामा फूल नास गरेको देख्नु भो भने यसले पनि धन प्राप्तिको संकेत गर्छ ।
११) सपनामा मुत्र, वीर्य, वा दिशा देख्छ उसलाई पनि धन प्राप्ति हुन सक्छ ।
१२) सपनामा उँट देख्नु भो भने यसबाट पनि धन प्राप्त हुने संकेत मिल्छ ।
१३) तपाईले मन पराएको गुरु ,जोगी वा धर्मात्मीक ब्यक्ती देखिए ।
The put up यस्ता संकेत देखिए हुन्छ धन लाभ, तपाईले पनि पाउनुभयो की ? appeared first on The Buddha Khabar.
Previous Previous post: आजआइतबार यसरि गर्नुहोस सूर्य देव को आराधना हुन्छ यस्तो लाभ…!
Next Next post: अख्तियारको ३० ‘स्टिङ अपरेसन’ : सहसचिवसहित ४४ जना पक्राउ